Maaskaro Caafimaad oo Wajiga ah, Maaskaro silikoon Laryngeal ah, Maaskaro Wajiga la Tuuri karo - Shanyou
Waxaa la aasaasay 2002, Hangzhou Shanyou Qalabka Caafimaadka Medical Co., Ltd. ayaa soo saaray suuxdinta iyo alaabada la tuuri karo ee neef mareenka ah. Waxaan bilaabaynaa inaan wax soo saarno Maaskarada Wajiga Caafimaadka iyo PPE laga bilaabo Febraayo 2020 sababo la xiriira faafida cudurka faafa ee corona. Lagu caddeeyay CE, ISO13485 iyo FDA, Shirkadeenu waxay ku raaxeysataa sumcad aad u wanaagsan oo ka dhex jirta macaamiisheenna oo ka kala socda in ka badan 50 waddan sida Jarmalka, Mareykanka iyo Japan, iwm Hangzhou Shanyou brand “ SHAQO “Waxaa si ballaaran loogu amaanay waxyaabo tayo sare leh.
Shaybaarka ayaa daboolaya 500m2, oo lagu qalabeeyay tas-hiilaad baaritaan oo dhameystiran oo loogu talagalay Maskaxda Caafimaadka iyo FFP2, maaskaro FFP3.
Shirka, waxaan ku soo bandhignay taxane ah alaabada maaskaro, tusaale ahaan, maaskaro wajiga caafimaadka, maaskaro wajiga qalliinka, Shaandhaynta nus-maaska, iwm. Dhanka kale
232021 / Abriil
Xirashada maaskaro waa hab muhiim ah oo looga hortago cudurrada neef-mareenka. Markaad dooranayso waji duubashada, waa inaan aqoonsanno ereyga "caafimaad". Maaskarado kala duwan ayaa loo isticmaalaa meelo kala duwan. Maaskarada caafimaadka ee la tuuri karo ayaa lagula talinayaa in loo isticmaalo meelaha aan camiranayn; Saamaynta ka hortagga ee maaskarada qalliinka caafimaad ayaa ka wanaagsan tan maaskaro caafimaad ee la iska tuuri karo. Waxaa lagu talinayaa in dadka u adeega ...
Maaskarada caafimaadku guud ahaan waa qaab saddex-lakab ah (oo aan tolmo lahayn), kuwaas oo ka samaysan laba lakab oo dun tol ah oo aan tolmo lahayn loo adeegsaday oo loogu talagalay daryeelka caafimaadka iyo caafimaadka, hal lakabna lagu daro dhexda labada lakab, oo la sameeyay ee xalalka lagu buufiyey dhar aan tolmo lahayn lehna in ka badan 99,999% sifeyn iyo bakteeriyada lidka ku ah alxanka ultrasonic Seddex lakab oo ah kala-daadashada maaskaro caafimaad: lakabka dibedda ...